Tsy azo itokiana ve? Mitombo ny fanelezana vaovao diso momba ny COVID-19 ary ny fifidianana ao Amerika Latina sy Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Vaovao diso miparitaka avy any Meksika hatrany Venezoelà sy Pero
Voadika ny 19 Aogositra 2021 7:34 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, عربي, Igbo, English
Fanaingoana nataon'ny Pch.vector tao amin'ny Freepik, nampiasàna ny lisansa Freepik.
Ity dia sombin'ny tatitr'i Paula Martins, tonian-dahatsoratry ny IFEX ho an'ireo ao anatin'ny Americas, “Ny ilaina fantatrao amin'izao ankehitriny izao: Ireo fironana anatin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampahalalambaovao any Amerika Latina sy ao Karaiba,” nokiraina sy naverin'ny Global Voices navoaka indray.
Raha efa miroso i Amerika Latina sy ny ao Karaiba miatrika ny valanaretina COVD-19, na dia somary miadana ihany aza, ary efa manangasanga ny mety ho “fiverenana amin'ny andavanandro nahazatra”, dia manarangarana ery amin'ny faravodilanitra kosa ireo olana ara-toekarena sy pôlitika. Indrindra indrindra fa ny tsy fisian'ny fahatokisana ny governemanta dia mitondra mankany amin'ny fanelezana vaovao diso momba ny COVID-19 ao Amerika Latina, hoy ny UNESCO.
Natrehan'ity faritra ity ny fitontonganana tanatin'ireo fandrosoana ara-tantara vitany nankany amin'ny fanekena ny zo hahazo vaovao — na teo aza ny fifanarahana iray vaovao ao amin'ny faritra. Mifangarika amin'ny fitobahan'ny vaovao diso sy ny fanelezana tsaho mandifotra ilay faritra ny tsy fahampian'ny torohay azo itokiana momba ireo olana saropady, tafiditra amin'izany ny ady atao amin'ny COVID-19, tsy hoe izay mifandraika amin'ilay aretina sy ny fomba fandraisana an-tànana azy io ihany, fa koa momba ireo olona pôlitika midadasika kokoa, indrindra fa ireo zotram-pifidianana. Ny fampiasàna boto no tena nifanotofan'ireo fampielezankevitra pôlitika marobe miady ny hahazo ny fon'ny vahoaka eny anaty habaka nomerika.
Toy izany no zavanisy tao Venezoelà tamin'ny Desambra 2020, niparitaka be mihitsy ny fanelezana vaovao diso momba ireo olan'ny fifidianana sy ny zotram-pifidianana — eny fa na dia ireo rantsana avy amin'ny governemanta aza. Ny Filankevitra Nasiônaly Misahana ny fifidianana, ohatra, dia nilaza tao amin'ny Twitter fa nisy ireo mpanaramaso iraisampirenena nanaraka ny fifidianana, isan'ireny ny avy any Etazonia, saingy nolavin'ny iraka amerikàna eo anivon'ny Fikambanan'ireo Firenena ao Amerika (OAS) io vaovao io.
Tao Meksika, talohan'ny fifidianana dia nitosaka be tety anaty tambajotra sôsialy ireo “fakom-baovao” momba ireo mpirotsaka, antoko, ary andrimpanjakana. Ho an'ireo mpikaroka, ny fahambangan'ny adihevitra lalina ara-pôlitika no nanokatra toerana ho an'ny fanelezana vaovao diso momba ireo mpirotsaka sy ny zotram-pifidianana. Voamarik'ireo manampahaizana manokana fa misangidongidotra be ireo fampielezankevitra nanely vaovao diso, satria efatra tamin'ireo tena nivoy izany no nandahatra tetikady tety anaty media sôsialy: ireo “mpanafàna lanonana,” izay nampiditra ny fitantaràna ; kaonty mibaiko tena (na boto) izay manatavy azy avy eo; ireo “trolls” izay manafika lasibatra voafaritra manokana; ary ireo “mpankafy,” olona tsotra izay mamorona ny fironana, amin'ny alàlan'ny famerenana mamoaka tsy am-piheverana ilay votoaty.
Nandritra ny fifidianana natao tao Pero tamin'ny Jona, dia sady niely teny ivelany no tany anaty tambajotra ny fandisoana vaovao mifandraika amin'ireo dingam-pifidianana; ny betsaka tamin'ireny, toy ny hita tany amin'ireo firenena hafa, dia niezaka ny hanimba ny fahatokisana an'ireo tomponandraikitra misahana ny fifidianana. Ankoatra ireo vaovao diso, nolalaovina ho amin'ny tombontsoa pôlitika ihany koa ireo vaovao tena izy. Ohatra, nisy ireo vaovao niely momba ny lisitry ny mpifidy, nilazàna fa misy anaran'olona efa nodimandry ao anatiny, saingy tsy apetraka tao ny fampahafantarana momba ny tetiandro sy ny dingana arahana hanitsiana sy hamarànana ireo lisitra.
Ho fiatrehana ireo olan'ny fahamarinam-baovao ao Pero, tamin'ny Janoary 2021 dia nisy tambajotra vaovao Peroviàna noforonina sy natao hanamarinana ny zavamisy, ho entina hiadiana amin'ny vaovao diso mandritra ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana. Fandraisana andraikitra nomena anarana hoe Ama Llulla (“aza mandainga” amin'ny fiteny Quechua), ary ny tanjony dia ny hanome dika avy amin'ireo vaovao voamarina ho amin'ireo fitenim-bazimba teratany ary handrava ireo sakana tsy ahafahan'ireo vondrona marefo hisehatra amin'ny resaka pôlitika.
Voadona ihany koa ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, nahavoatohintohina ny fahafahana mahazo vaovao azo itokiana. Satria nihavao ny hetsipanoherana nanerana ireo faritra, noho ny hasosorana manoloana ireo tsy fahafahampo amin'ny hetsika ataon'ny governemanta hiadiana amin'ilay valanaretina, hatramin'ireo olana ara-drafitra efa hatry ny ela nialoha làlana ny COVID-19, hita nandritra ireny hetsika ireny ihany koa ny herisetra fanaon'ny polisy amin'ireo mpanao hetsipanoherana, saingy nampihariny tamin'ny media. Araka ny FLIP, 257 ireo fanafihana nanjo ny gazety no voarakitra nandritra ny fandrakofan-dry zareo an'ireny hetsipanoherana ireny.
Nitosaka hany koa nandritra ireny hetsipanoherana ireny ny fanelezana vaovao diso, toy izay nisy nandritra ireo fihetsiketsehana tao Kôlômbia. Notaterin'ireo loharanom-baovao avy ao an-toerana fa lahatsary an-jatony, rakipeo, ary saripika marobe no mivezivezy ety anaty tambajotra momba ny fitokonana nasiônaly tao Kôlômbia, izay ny maro amin'izany dia misy lainga na vaovao tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana, izay nisy fiantraikany tsy azo tsinontsinoavina tamin'ny fitantaràna ny tena zavanisy marina teny an'arabe.
Nisy ihany koa ireo herisetra nitranga tsy tao anatin'ireny hetsibahoaka ireny. Avy amin'ireo mpiasam-panjakana ambony no tena tsy mitsaha-mitombo ireo kabary fanaratsiana sy vava ratsy natao hamelezana ny gazety. Farafahakeliny, efatra ireo mpanao gazety tao Amerika Latina no maty nisy namono nanomboka tamin'ny Janoary 2021.
Raha zavatra iray mampiavaka ny ao amin'ny faritra ny tsimatimanota rehefa misy trangana herisetra atao amin'ireo mpanao gazety, efa mba nahita fivoarana ihany kosa isika tao anatina tranga telo goavana momba ny herisetra natao an'ireo mpanao gzety sy ireo mpiaro ny zon'olombelona:: Berta Cáceres (Honduras), Jineth Bedoya (Kôlômbia), ary Alex Silveira (Brezila). Anaty faritra iray fantatra amin'ny resaka tsimatimanota anatina tranga tahaka izany, tsy maintsy ankalazaina koa ny vaovao tsara.
Ity dia sombiny avy amin'ny “Ny ilaina fantatrao amin'izao ankehitriny izao: Ireo fironana anatin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampahalalambaovao any Amerika Latina sy ao Karaiba”. Ny andiany “Regional Spotlights” an'ny IFEX dia manome fanefitra amin'ireo antontam-baovao manempotra ny olona isanandro. Hadihadian'ny lahatsoratra tsirairay ireo fironana ao amin'ny faritra mba hahafahan'ireo mpamaky miditra lalina kokoa any anatin'ireo olana momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoana vaovao. Azonao jerena ato daholo izy ireny.